Shugaring - recipe ne citric acid
Runako uye utano Mvere
Shugaring inzira inobatsira yekubvisa vhudzi risingadiwi. Inobva pakushandiswa kwepesa. Zvikamu zvaro zvakakosha ishuga uye mvura. Asi mune dzimwe nguva, ruzivo ne citric acid rinoshandiswa kuita sludge paste.
Kubatsira kwekuvhara pasta ne citric acid
Mutsva wekusimudza pasta ne citric acid ine zvakawanda zvinobatsira. Kutenda kushandiswa, kuumbwa kunowedzera kusununguka uye kunochengetedza kushanda kwakakodzera kwenguva yakareba. Munyaya iyi, ndeyechokwadi:
hypoallergenic - paunenge uchiita mapepa, dhayi, zvinonhuwira uye zvinodzivirira hazvisati zvashandiswa, zvinogona kushandiswa zvakachengetwa kunyange neavo vane zvinokonzera zvipfeko;
nyore-kushandisa-kana tichienzanisa newaini, pasta yekutakura shugaring, yakagadzirirwa nekepeti uchishandisa citric acid, yakakurumidza uye yakashambidzwa nyore nemvura;
zvinyoro-izvo zvakakoswa zvinoenderana zvakanaka paganda uye zvinonyatsochera bvudzi izvo follicles hazvikuvadzi, saka, mushure mekugadzirwa, bvudzi risina kuonekwa uye harina kutsamwa kwakasimba kana kwenguva refu.
Mukuwedzera, citric acid inovhenekera vhudzi. Kana bvudzi duku duku risina kubviswa, zvino zvichapenya zvikuru uye hazvizoonekwi paganda.
Nzira yekuita sei pata pasta ne citric acid?
Kuti ugadzirire iwe pachako kumba, gadzirira pasta rine recipe ne citric acid. Usatora nzvimbo yacho nemvura yemonimu, nokuti ine yepamusoro yezinga acidity.
shuga - 4 maspuni;
mvura - 2 cl.
citric acid powder - 1 tsp.
Zadzai shuga nemvura mune chigadziko chakavhara uye muise pamoto unotonhora. Itai kuti musanganiswa ugare. Paunoona kuti shuga yakanyungunuka zvachose, wedzera citric acid uye upise simba rinoguma, uchienderera mberi kuchiita. Mushure memaminitsi gumi, mvura yacho ichabikira. Ichawana ruvara rwegoridhe remafu uye kunwa kunonaka kunotapira. Ndiko panguva ino kuti inofanira kubviswa kubva pakateti. Caramel inogona kupisa mumudziyo unopinza, saka zvakanakisisa kuti uise mumudziyo wepurasitiki.
Usati washandisa pesa iyi, iwe unofanirwa kuitora uye kuikotamisa zvakanaka uye kuitambanudza kuti uwane kutenderera kusagadzikana. Iyo yakagadzirwa nemon slurping ne citric acid, yakagadzirwa maererano neshoko iri, inogona kuiswa mu microwave, kana yakaoma zvikuru. Zvinyorwa mushure memasekondi makumi matatu zvichange zvakanyanyisa.
Auburn mvere dzemvere
Masikisi ekupenya kwebvudzi
Bhudziro bvudzi bhudzi bvudzi
Masikisi kurwisana nevhudzi
Mvere dzinovhenekera pamba
Moto mvere dzvuku
Pulse 90 kurohwa paminiti - izvi zvinowanzoitika here?
Magnesia kuti uwedzere kurasikirwa
Madzimai akanaka akanaka echikadzi
Anonamatira nehuga kubva mbiriso chikafu
Sarah Jessica Parker akazivisa kusunungurwa kwekambani yemavhura madema emuumbi wake
Kate Winslet achabatwa mufananidzo wechipiri "Avatar"
Caloric yezvakavezwa mbeu yakabvongodzwa
Porridge mu microwave
Suti yechikadzi neketi
Ducane Zvokudya - Kubvumirwa Zvokudya
Nzira yekukura sei misumari yakareba?
Zvokudya zvakaringana kupera muviri
Mhando dze chrysanthemums dzinotonhora munguva yevhu
Jenny Shimizu uye Angelina Jolie
Nzira yekubika mucheka mutsvuku yekubika zvinonaka uye zvepakutanga ndiro
Kusanganiswa kwevana pasina mafuta omunondo uye GMO